Man'ee hangii filattamee foormulaa issa galchitten guutufi Naqaa sarara, dhiibi Dirqala Furtuu FILANNOO+Enter. Gaqqabi Dirqala Furtuu FILANNOO+Enter+Shift dhangii man'ee naqaa man'ee hangii waamaraati galchuufi .
Qaree man'ee wardii keessa gara qaree bitaa hammanga deetaa ammeeti siqsis. Yoo man'een tarjaa gara bitaa qabiyyee xiyya duwwa ta'ee, Xiyyen gara tarjaa issa bitaa deetaa qabbatee jiirutti siqsis.
Qaree man'ee wardii keessa gara qaree mirga hammanga deetaa ammeeti siqsis. Yoo man'een tarjaa gara mirga qabiyyee xiyya duwwa ta'ee, Xiyyen gara tarjaa issa mirga deetaa qabbatee jiirutti siqsis.
Qaree man'ee wardii keessa gara qaree irra hammanga deetaa ammeeti siqsis. Yoo man'een tarree gara bitaa qabiyyee xiyya duwwa ta'ee, Xiyyen gara tarree issa irra deetaa qabbatee jiirutti siqsis.
Qaree man'ee wardii keessa gara qaree jala hammanga deetaa ammeeti siqsis. Yoo man'een tarree gara bitaa qabiyyee xiyya duwwa ta'ee, Xiyyen gara tarree issa jala deetaa qabbatee jiirutti siqsis.
Man'een deetaa qabbatee jiru man'een ammee irra gara xumuraa fufaa hangii man'ee deetaa jiiruu mara fili,Qixa Xiyyan dhiibamme jiru. Tarree fi Tarjaa yoo walliin filtee, hangiin Man'ee rektaangulaa fili.
Qaree garra kannati siqsisuun Naqaa Sarara garra Iddoo Wardi sanduuqa.
DirqalaAlt fi arfii jecha "Tarree" jedhu keessatti jalamurame
Dirree ammee garraa iddoo "tarree" ti garagalchii ykn siqsisi.
DirqalaAlt fi arfii jecha "Tarjaa" jedhu keessatti jalamurame
Dirree ammee garraa iddoo "tarjaa" ti garagalchii ykn siqsisi.
DirqalaAlt fi arfii jecha "Deetaa" jedhu keessatti jalamurame
Dirree ammee garraa iddoo "Deetaa" ti garagalchii ykn siqsisi.
Dirqala dirree ammee fi agarsiisu.